I-LADM-NjengeModeli eyahlukileyo yoLawulo lweMihlaba - eColombia - eGeofumadas
Agasti, 2016 cadastre, Okufumaneka, egeomates My
Isishwankathelo senkcazo-ntetho eyenziwe nguGolgi Alvarez noKaspar Eggenberger kwiAndean Geomatics Congress eBogotá, ngoJuni 2016.
Iimfuno zeCadastre ezininzi
Ngenxa yokuqingqwa komthetho we-National Development Plan 2014 - 2018 kunye nokudalwa-Arhente yeSizwe for ant nemihlaba, ngembonakalo kwingingqi yomhlaba Colombia itshintshe kakhulu kwaye izinto ezintsha ekwakheni umgaqo-lizwe njengoko :
Ukumiselwa kwemisebenzi ye-cadastre kunye nokuthunyelwa kwamagunya kumgangatho wendawo,
Externalization yokusebenzisa ukugcinwa wokumiswa cadastral.
Ukufikelela ekuhambelaneni kolwazi oluphambili kwiinkcukacha zeCadastre kunye neRejista,
Ukuphuculwa Project of Administration loMhlaba e Colombia, ezixhaswa yi-Swiss Cooperation (Seco) ixhasa iinkqubo ezahlukeneyo ezinxulumene ukuba umhlaba nkqubo, kubandakanywa inkxaso kulwakhiwo ulawulo komhlaba node ngaphakathi sikhokelo ICDE, i ukuxhasa ngokutsha amaziko kunye yokuziqhelanisa IGAC ngendima yakhe entsha njengesiphathamandla cadastral, esomeleza nkqubo iingcebiso cadastral-Registry ukuba sikhokelo reference geodetic kunye zenkxaso zokuqonda i yombono cadastre emininzi.
I LADM Model
Njengoko njengento ezintsha kwi-sikhokelo kunye technologies nkqubo, liye laqalisa ukwamkelwa kwe-International Standard of woLawulo loMhlaba ekuthiwa ISO-19152; conoc I-LADM (uLawulo loMhlaba weDomain Model) Ukubandakanywa kwalo mgangatho kuvumela intsalela phakathi koxinzelelo oluveliswe kukunikezelwa kwetekhnoloji kunye nemfuno yeenkonzo ngabemi kwimiba yolawulo lomhlaba phantsi kwendlela emanyanisiweyo.
Okwangoku owakhe inguqulelo yokuqala LADM imodeli ongundoqo apha naphaya umthetho Colombian kuquka ngumzekelo ubuncinane:
Abanebango la maqela, abantu, yezorhwebo kunye namaqumrhu oluntu ezinxulumene nolawulo lwekhonkco amalungelo omhlaba,
iiyunithi yolawulo emele izinto ezahlukeneyo zendawo, zombini umyalelo labucala kunye noluntu.
Uluhlu lwamalungelo, uxanduva kunye nezithintelo ezikhoyo phakathi izinto zasekuhlaleni kunye neempawu ezibhaliswe kwi Registry Land.
iiyunithi zeSithuba iimpawu zazo, nto leyo ezikhoyo ulwazi lwangoku cadastral, leyo uza kuvuka abaqhubi cadastre emininzi ukubaleka kungekudala.
Ukwamkelwa kwe-LADM kukwaquka inkxaso kwiColombian Spatial Data Infrastructure (ICDE), ngokusekwa kweNode yoLawulo loMhlaba, eya kuthi isebenze njengesiseko sokusebenzisana kwezinto eziye zafanekiselwa kumbindi. Ngokuthe ngcembe, amaziko ohlukeneyo aya kuyilungisa i-LADM kwiinkqubo zawo, eqinisekisa ukubhekiswa ngokukodwa kwimpahla, amalungelo, abantu kunye neerhafu ezenza umatshini weNkqubo yeSizwe yoLawulo loMhlaba yaseColombia.
Esinye sezixhobo ezisetyenziselwa ukuphunyezwa kwe-LADM yi-INTERLIS. Olu lulwimi olukhethekileyo ekuchazeni imodeli yedatha yendawo, enefomathi yokudlulisa kunye nothotho lwezixhobo apho ukuqinisekiswa, ukudityaniswa, ulawulo lwentengiselwano kunye nokuhlaziywa kolwazi kunokufezekiswa ngeenkqubo zokusebenzisana.
Kutshanje liphuhlise amagcisa uqeqesho kumaziko ahlukeneyo inxaxheba kwiprojekthi kusetyenziso INTERLIS for modeling, yaye liphuhlise luguqulelo oluphambi LADM imodeli Colombian kolu lwimi.
I-Multipurpose Cadastre Pilots
Iprojekthi ixhasa iAgustín Codazzi Geographical Institute (IGAC) kunye ne-National Registry Superintendency (SNR), kulwakhiwo lwemodeli, iinkcukacha zobuchwephesha kunye neenkqubo zophuhliso lwee-Multipurpose Cadastre Pilots. Oku kubandakanya ukwenziwa kwendawo yokugcina idatha yecadastral kunye nerejistri; ngezixhobo zesoftware zasimahla eziququzelela ukwakhiwa, ukuhlela nokupapashwa kwedatha, kunye nezixhobo zokuqinisekisa idatha eveliswe ngophumezo lwangaphandle.
Ukongeza imisebenzi yobugcisa emfundo intsimi kunye kwilebhu ezahlukeneyo inkqubo izixhobo zophando kwempahla walungisa.
Esebenzisa ukuphunyezwa Colombian yabucala imodeli LADM ezichazwe INTERLIS, iikontraka onawo babo izixhobo eziyimfuneko ukulungiselela ukuhambisa ulwazi oluqokelelwe ebaleni ngokomfuziselo okhankanyiweyo we-ISO 19152. I-IGAC kunye ne-SNR baya kuba nazo izixhobo zokuqinisekisa, ukulawula nokugcina ulwazi kunye namaxwebhu eziphumo zokulinga, ukuvelisa izifundo ezifundiweyo. kunye nokuphucula indlela yokuvavanya iimveliso zovavanyo lwe-cadastral.
Olunye ulwazi malunga neProjekthi http://www.proadmintierra.info/
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukuphunyezwa kwe-LADM kusetyenziswa i-INTERLIS-Colombia
Post Next Bentley Systems yazisa Udliwano for 2016 iphefumlelweOkulandelayo »